Spotify inogadzirira iyo app yeApple Watch (yatove mubeta) | Ndinobva mac
Kana tichitaura nezveSpotify, simba rekuishandisa neApple Watch yedu kuwedzera kune iyo iPhone, Mac uye mamwe mapuratifomu anouya mupfungwa. Zvakanaka, zvinoita sekunge papfuura chinguvakana iyo official Spotify application inosvika paApple WatchZvirinani ndizvo izvo vamwe vashandisi vatitaurire uye izvo zvakaverengerwa mune inozivikanwa MacRumors webhusaiti.
Parizvino izvo zvatiinazvo ndeye yakavharwa beta vhezheni kune vashoma vanotoinakidzwa neApple zvishandiso. Mune ino kesi zvinoita sekunge kunyangwe iri yepamutemo vhezheni iyo beta inowedzera zvimwe zvikanganiso zvenguva maererano nekushandisa, asi isu hatina kukahadzika kuti idanho rakakura mushure mekumirira kwenguva yakareba zvakadaro app yepamutemo.
Dambudziko nderekuti hatigone kurodha mimhanzi pane wachi
Parizvino iko kunyoreswa kwepamutemo kwakatangwa mu beta fomu yevashandisi vashoma kunopa mukana wekuteerera kumatamba edu ekuverenga kana zvinyorwa zvevamwe vashandisi, zvinotibvumidza kuteerera mimhanzi pazvinodiwa uye kufamba nemamenyu eSpotify chaizvo. Dambudziko mune ino kesi nderekuti iyo vhezheni haibvumiri sarudzo yekurodha mimhanzi kuchow uye ichi chinhu chekuchengeta mupfungwa asi haisi njodzi kana ...
Chero zvazvingaitika, chinhu chakanaka ndechekuti chishandiso ichi chinouya nenzira inoshamisira muchimiro cheWatchOS beta mushure menguva yakareba umo vashandisi vakataura kuvhurwa kwayo. Inofanira kuyeukwa kuti nhasi tine app inotipa sarudzo dzekushandisa Spotify seWatchify, asi chero zvakadaro chinhu chinonakidza ndechekuti iyo yepamutemo Anwendung ichapa zvirinani sarudzo pane aya echitatu-bato kunyorera kunyangwe zvimwe zvisina kunaka ruzivo sekurega kubvumira mimhanzi kuti itorwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Spotify inogadzirira yayo app yeApple Watch (yatove mubeta)
Apple inomira kugovana zviyero zvekutengesa zvezvigadzirwa zvacho kubva Zvita
AppleCare + netsaona kukuvara kufukidzwa kweMac inosvika kune dzimwe nyika, kunyange isati yasvika kuSpain